Amanye ama-AirPod avutha amalangabi eFlorida | Ngivela kwa-mac
Amanye ama-AirPod avutha amalangabi eFlorida
Izindaba ezifika namuhla maqondana nama-AirPod. Ama-headphone angenacingo angenantambo avela enkampanini esekwe eCupertino athole ukwamukelwa okuhle emakethe ngonyaka owedlule. Kepha izindaba ze isinqumo esikhishwe izolo yisakhamuzi saseFlorida, igcina onjiniyela baseSilicon Valley besemaphethelweni.
Ngokusobala, uJason Colon, osebenzisa i-AirPods ohlala eFlorida, ubesebenzisa ama-headphone akhe amasha ngenkathi edlala imidlalo ejimini lapho ngokuzumayo beqala ukungasebenzi kahle nokusolakala ukuthi, ngokwe-akhawunti yakhe, intuthu emhlophe yaqala ukuphuma komunye wabo.
Ngokusho kukaJason, wethuke washiya lo mshini komunye wemishini yokuzivocavoca ngesikhathi eyofuna usizo. Lapho ibuya, enye yama-headphone itholwe ishile yacekeleka phansi ngokuphelele. Ngakho-ke watshela omunye wabezindaba owenanela izindaba, kulokhu isiteshi sethelevishini, Isiteshi 8:
Bekuvele kunje. Bekuvele kukhonjiwe. Angizange ngikubone kwenzeka, kepha lapho ngifika lapho, kwase kuthosiwe! Uyawubona umonakalo odalwe ngamalangabi komunye wabo. "
Ngeshwa, kubonakala sengathi akekho omunye umuntu owayekhona ejimini ngaleso sikhathi, ngakho-ke kungaba nzima kakhulu ukuthola kahle ukuthi kwenzekeni. Lo mbiko uzoba ngowokuqala ukukhuluma ngalezi zinhlobo zezinkinga kuma-Apple AirPods, futhi Kubonakala sengathi kungadalwa yiphutha ebhethri lomkhiqizo.
Njengoba sazi, eminye imikhiqizo ihlupheke ngezinkinga ezifanayo futhi imbangela ezimweni eziningi kube ukwehluleka kwebhethri abayikhuphukayo.
U-Apple njengamanje ufunda ngokwenzekile, futhi uzofuna incazelo ngokwenzekile, ikakhulukazi ukugwema izehlakalo ezizayo. Noma kunjalo, evela enkampanini yaseCalifornia bathumela umyalezo oqinisekisayo ukuthi kumane kuyindaba eyedwa nokuthi umkhiqizo, othengiswe kakhulu, awuzange ubike izinkinga ezifanayo kwenye indawo emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Amanye ama-AirPod avutha amalangabi eFlorida
I-Apple ivuselela i-beta yesibili yonjiniyela we-MacOS 10.13.4 ekhishwe kuleli sonto
Kusele iminyaka eyishumi nambili ukusuka kwi-iPod HiFi kuye kwi-HomePod